अमिताभ र अभिषेकले कोरोनालाई जितेर घर फर्किन लाग्दा ऐश्वर्या र आरध्याले गर्नेछन् अस्पतालबाट बिदाई, कहिले डिस्चार्ज होलिन् ऐश्वर्या ? – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/अमिताभ र अभिषेकले कोरोनालाई जितेर घर फर्किन लाग्दा ऐश्वर्या र आरध्याले गर्नेछन् अस्पतालबाट बिदाई, कहिले डिस्चार्ज होलिन् ऐश्वर्या ?
अमिताभ र अभिषेकले कोरोनालाई जितेर घर फर्किन लाग्दा ऐश्वर्या र आरध्याले गर्नेछन् अस्पतालबाट बिदाई, कहिले डिस्चार्ज होलिन् ऐश्वर्या ?
काठमाडौं । ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’का नयाँ एपिसोडहरू सुरू भएका छन् । सोशल मिडियामा प्रशंसकहरूको खुशी हेर्दा यो सीरियल लोकप्रिय रहेको बुझ्न सकिन्छ। एपिसोड सुरु हुने खबरसँगै यसका धेरै माइमहरू भाइरल भएका छन् ।
तारक मेहता शो को हास्य फरक छ। पारिवारिक कार्यक्रम जहाँ मानिसहरूले सफा कमेडी देखाउँछन् दर्शक हँसाउछन् । यसैले सबैले यो भन्छन् तारक मेहेतका का उल्टा चश्मा राम्रँे छ । जेठालाल तारक मेहता को सबैभन्दा लोकप्रिय चरित्र हो । यो शो उनको कारण धेरै लामो भयो । अब नयाँ एपिसोडहरू सुरू हुँदा सबैको दिमागमा एउटै कुरा आएको छ९ जेठिया फर्कियो ।
तारक मेहताको फ्यान फलोइंग यति ठूलो छ कि यो शो मन पराउने मान्छेले यसको खराब कुरा सुन्न सक्दैनन्। त्यसकारण जब कसैले सोध्यो कि किन यो कार्यक्रम यति धेरै व्यापार गरिरहेको छ भने प्रशंसकहरूको एक मात्र उत्तर छ ‘चुप लाग्नुहोस् सातौं फेल मान्छे ।’
शोको क्रेज त्यस्तो छ कि यसका फ्यानहरूले हरेक एपिसोड याद गरे । केही मेमहरु यस्ता क्रेजी दर्शकको भावनालाई बाहिर ल्याउने हिसावले समेत सार्वजनिक भएका छन् ।
यो शो अब यति पुरानो भएको छ, कि धेरै व्यक्तिहरु ती पुरानो एपिसोडहरुसँग तुलना गर्छन् जुन अझ रमाईलो हुन्थ्यो। त्यसकारण, त्यस्ता मेम्सहरू सोशल मिडियामा पनि भाइरल छन् जहाँ नयाँ एपिसोडहरू कम हास्यास्पद हुँदा पिन्चहरू लिइन्छन् ।
तारक मेहताको नयाँ एपिसोड शुरु हुने बित्तिकै प्रश्न खडा हुन थालेको छ कि पोपटलालको बिहे कहिले हुनेछ ? अब यस प्रश्नको उत्तर फिल्म हेरा फेरीको संवादमा लुकेको छ ९ अब के हुन्छ, हामी यसलाई सजिलो बनाउँदछौं ।
तारक मेहता एक शो हो जस मार्फत सबैलाई साँचो मित्रताको अर्थ पनि बताइएको छ। तारक मेहता र जेठलालको मित्रता जय वीरू भन्दा कम छैन। हरेक गाह्रो घडीमा तारक मेहता जेठालाललाई सहयोग गर्दछन्। अब हेर्न बाँकी छ ताराक मेहता कसरी चल्छ, र शोका पात्रहरूले कसरी प्रतिक्रिया दिन्छन्।
आज २०७७ साउन ११ गते आइतबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-